Warar - J hagitaanka hagida hagida haga
J jillaab hakin Suspension la geliyo neoprene for ADSS cable
Waa maxay J jillaab haysa?
J qabashada hakin isku haynta / hakin ka hakin waxaa loogu talagalay in lagu siiyo ganaax ah 5 ilaa 20mm fiilooyinka ADSS anteenada at ulo dhexdhexaad ah on waddooyinka cable la xagal <20 ° on shabakadaha marin u helidda (taako ilaa 100m).
Isku-haynta hakin J jookhu wuxuu ka kooban yahay J jook, fur iyo shaati.
Qalabka isku haynta
J jillaab ka samaysan bir bir ah
Gacanta ka samaysan neoprene
Fur ka sameysan bir bir ah oo la ilaaliyo
Feature haysa haysa la J jillaab
Qaabka jumladda haynta J jillaabku waxay u oggolaaneysaa inuu ka baxo fiilada si toos ah qolka.
J Qabsashada hakin ku hakin ah bir bir ah ama haysa tuubada.
Xayiraadda joojinta waxaa lagu dhejin karaa tiirarka alwaaxda, tiirarka shubka wareegsan iyo tiirarka birta badan ee polygonal iyadoo la isticmaalayo hal ama laba iyo toban xarkood oo bir ah oo aan lahayn iyo laba bir.
J Qabsashada hakin isku hakin ah oo lagu ganaaxay qori dabacsan
Xayiraadda joojinta waxaa lagu dhejin karaa 14mm ama 16mm bool jillaab ah tiirarka alwaaxda la qoday.
J haynta hakinka qaboojiyaha oo lagu laalay bool
Isku-xidhka shumiska waxaa lagu xaqiijin karaa 14mm ama 16mm bool on ulihii alwaaxda la qoday
Ku rakibida isku haynta ADSS
Habka rakibaadda 1: J Qabsashada hakin ku hakin ah bir bir ah ama haysa tuubada.
Habka rakibaadda 2: J Qabsashada hakin isku hakin ah oo lagu ganaaxay qori dabacsan
Habka rakibaadda 3: J haynta hakinka qaboojiyaha oo lagu laalay bool
Isku-xidhka shumiska waxaa lagu xaqiijin karaa 14mm ama 16mm bool on ulihii alwaaxda la qoday.